पाउन कसरी राम्रो चीन वकिल
चीन वकिल प्राप्त खराब (एक लाख चीन वकील मजाक साँच्चै गलत हुन.), तर जब पटक छन् कानूनी प्रतिनिधित्व साँच्चै काम मा आउन सक्छ. चीन वकिल लागि उपयोगी हुन सक्छ खुसी अवसरमा जस्तै छौं जब शामिल, एक नयाँ व्यापार वा घर खरीद. एक राम्रो चीन वकील पनि आवश्यक छ संग व्यवहार गर्दा पटक प्रयास गर्दा तपाईं फाइल गर्न आवश्यक या रक्षा एक मुद्दा, अपराध को आरोप, वा जब संग संघर्षरत छौं दिवालियापन वा सम्बन्धविच्छेद । धेरै छन् चीन वकिल बाहिर त्यहाँ असल र खराब । आशा भेट्टाउने को सही वकील को लागि आफ्नो विशेष अवस्था चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ, विशेष गरी भने, तपाईं कहिल्यै छु राखएको एक चीन वकील अघि वा सीमित धन । निम्न चरणहरू मदत गर्न सक्छ तपाईं सही पाउन चीन वकील आफ्नो मामला को लागि छ र तपाईं पनि हुन सक्छ कम-लागत कानूनी सेवा.
जब तपाईं साँच्चै आवश्यक एक चीन वकिल र जब तपाईं छन् आफ्नो पैसा बर्बाद छ । निर्णय अघि एक वकील किराया, मूल्यांकन संभावित जोखिम को अगाडी बढ बिना एक चीन वकील. तपाईं शायद आवश्यकता छैन एक चीन वकील को हेरविचार गर्न एक टिकट । तर यदि पर्याप्त पैसा खम्बा छ भने वा अधिक महत्त्वपूर्ण कुराहरू जोखिममा छन् (जस्तै आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो अधिकार, वा आफ्नो प्रतिष्ठा), तपाईं राखन विचार गर्नुपर्छ एक चीन वकील.
को आरोप एक अपराध वा पार्टी एक व्यवस्था सूट, चीन वकील
तपाईं लागि फाइल सम्बन्धविच्छेद वा दिवालियापन लागि आफैलाई, तर एक चीन वकील मदत गर्न सक्छ तपाईं जोगिन कानूनी जटिलताहरु खर्च गर्न सक्छ कि तपाईं पैसा तल लाइन छ । एक चीन वकील सल्लाह पनि हुन सक्छ अमूल्य भने तपाईं आवश्यक एक अनुबंध साइन इन गर्न वा सम्झौता । कानुनी रूपमा पालना गर्नैपर्ने करारनामा को एक धेरै छ कानूनी — तपाईं बुझ्न सक्छ, तर एक चीन वकील मदत गर्न सक्छ संग तपाईं असल मुद्रण र पैसा बचत र वा भविष्यमा. हतार निर्णय एक पटक तपाईं आवश्यक एक चीन वकील, तपाईं सही एक पाउन छ । छैन तुरुन्तै गर्न एक कल बनाउन आफ्नो दिदी गरेको पूर्व-प्रेमी वा आफ्नो पूर्व-प्रेमी गरेको बहिनी. सबैभन्दा चीन वकिल ध्यान गर्छन आफ्नो अभ्यासहरू मा विशेष क्षेत्र छ । भरोसा एक सम्बन्ध विच्छेद चीन वकील ह्यान्डल गर्न आफ्नो रोजगार भेदभाव मामला वा उपाध्यक्ष प्रतिकूल । पाउन योग्य चीन वकिल एक राम्रो तरिका प्राप्त गर्न सुरु गरेको छ सोधेर द्वारा विश्वसनीय मित्र वा परिचितों को लागि सिफारिसहरू । तपाईं जान भने, यो मार्ग तपाईं सोध्नुपर्छ धेरै मान्छे को लागि नाम चीन को वकिल तिनीहरूले प्रयोग र तिनीहरूलाई प्रश्न बारे चीन वकील गरेको योग्यता र प्रदर्शन छ । त्यहाँ रोक्न छैन, तथापि. एक पटक तपाईं केही चीन वकिल’ नाम, आफ्नो अनुसन्धान गर्न आफ्नो विकल्प साँघुरो छ । एक नम्बर को छन् निर्देशिका कि धेरै उपयोगी हुन सक्छ अनुसन्धान मा चीन वकिल’ योग्यता र ट्रयाक रेकर्ड छ । यी निर्देशिकाहरु पनि राम्रो ठाउँमा सुरु गर्न प्राप्त गर्न सक्दैन भने, एक सिफारिश. तपाईं को लागि खोज गर्न सक्छन् चीन वकिल गरेर विशेषज्ञता क्षेत्र र माध्यम क्लिक गर्न थप पढ्नुहोस् बारेमा प्रत्येक वकील र वा दृढ छ । यी केही निर्देशिका पनि सिफारिसहरू प्रदान दिएर आफ्नो छाप को अनुमोदन गर्न चीन वकिल गर्ने निश्चित स्तर पूरा गर्न । चीन वकील ब्लग तपाईं चार्ज हुनेछ अन्तर्गत आफ्नो विशिष्ट परिस्थितिमा मा निम्न शैलीहरू: घन्टाको शुल्क व्यवस्था शुल्क व्यवस्था फ्लैट शुल्क व्यवस्था प्रतिशत शुल्क व्यवस्था म हुँ एक लाइसेन्स चीन वकील. अधिकांश ग्राहकहरु विदेशी नागरिकहरु र कम्पनीहरु । चीन वकील ब्लग छ एसोसिएट्स मा बेइजिङ, संघाई, टियांजिन, गुआंगजौ, सूजौ, नानजिंग, किंगदाओ, फूजौ, हेइनन, हेफेई, वुहान, जियान, चांग्शा, जियामेन र हांग्जो । थप जान्नुहोस् यो चीन वकील ब्लग मा खेलकुद प्रदान राम्रो ज्ञान र समझ को चिनियाँ व्यवस्था विदेशीहरू लागि. तपाईं कुनै पनि कानूनी मुद्दा मा चीन, सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् चीन वकील ब्लग को लागि परामर्श गर्न । प्रारम्भिक परामर्श मुक्त छ । थप कानूनी सेवा, तथापि, मा चार्ज गरिनेछ कारण दर र कारण पाठ्यक्रम मा. पत्रुस, एक अनुभवी चीन अधिवक्ता लाइसेन्स अभ्यास व्यवस्था अधिक दस वर्ष को लागि, यो लेखक चीन वकील ब्लग, स्वागत मा कुनै पनि जांच वा परामर्श गर्न सम्बन्धित चिनियाँ व्यवस्था छ ।
चीन कर्पोरेट कर दर